Tallaabada uu Farmaajo qaaday waa sharci darro | KEYDMEDIA ONLINE
Warqadda uu soo saaray Farmaajo wuxuu ku timamay “is-miidaamin siyaasadeed, falaad iyo foori diiran, sii hurin khilaafkii siyaasadda iyo abuurista jawi keena qalalaase amni”.
MUQDISHO, Soomaaliya – Guddoomihii hore ee Gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen (Muun-gaab) soona qabtay xilka Guddoomiyaha Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida, ahna aqoon yahan cilmiga Qaanuunka Dambiyadda, ka heysta shahaadada PHD, ayaa sharci darro ku tilmaamay tallaabada u Farmaajo, shaqada kaga joojiyay Ra’iisul Wasaaraha.
“Tallaabada uu maanta qaaday Madaxweynaha muddo xilkeedkiisu dhammaaday ee Maxamed Farmaajo, waa sharci darro, mana jirto meel ay Dastuurka KMG ah uga qoran tahay inuu Madaxweyne shaqada ka joojin karo Ra’iisal Wasaaraha” Ayuu yiri Muun-gaab.
Muun-gaab, wuxuu xusay Ujeedada ugu weyn ee Farmaajo ka leeyahay waraaqda ay tahau inuu ku hor istaago dadaallada lagu doonayo in Kiiska Ikraan Tahliil laga gaaro caddaalad, lana caddeeyo ciddii mas’uulka ka ahayd.
“Shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baqayaa in ay garab istaagaan dadaalada uu wado Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ee lagu doonayo in Dalka ay ka dhacdo Doorasho hufan iyo in Ikraan Tahliil ay hesho Caddaalad”. Ayuu sidoo kale yiri Guddoomihii hore ee Gobolka Banaadir.